Madaxweynihii hore ee Galmudug oo walaac ka muujiyay natiijada imtixaankii lagu dhawaaqay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Madaxweynihii hore ee Galmudug oo walaac ka muujiyay natiijada imtixaankii lagu dhawaaqay
Waxaa isoo gaaraya walaaca iyo tabashada dad badan ay ka qabaan natiijadii imtixaankii fasalka 12aad ee maanta faafisay wasaaradda waxbarashada ee Dowladda Federaalka ah.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo muddo ku dhow 30 Sano ka shaqeynayay waxbarashada ayaa walaac la muujiyay natiijadii maanta lagu dhawaaqay oo muran ka dhashay.
Guuleed ayaa ugu baaqay Madaxda Sare in dib u eegis lagu sameeyo Sidda ay ku timid in lasoo bandhigo 10 iskuul ee ugu wanaagsan.
Warbixin uu soo saaray Guuleed ayaa siddaan u qorneyd:
Previous articleMaxaad ka Ogtahay goorta uu furmayo shirka DF,J.land & P/land, & Xog laga helay?
Next articleWarar cusub:-Galmudug oo ka hadashay dagaalo ka dhacay degaannada Maamulkaas